Cumar C/rashiid Cali Sharmaake Oo Kuwajihan Magaalada Kismaayo Ee Xarunta Gobolka Jubadda hoose – STAR FM SOMALIA
a’iisul Wasaaraha Somaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake, ayaa u ambabaxay Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose, halkaasi oo uu kaga qaybgalayo Xaflada Caleemo saarka Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehliya, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Xildhibaano kasoo jeeda Maamulka Jubbaland iyo xubno kale oo lagu casuumay Xaflada.
Cumar C/rashiid ayaa Garoonka Muqdisho waxaa ka qaaday Diyaarad, waxaana uu ku sii jeeda Magaalada Kismaayo oo maanta ka duwan sidii hore jawigeeda.
Ammaanka Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose, ayaa la adkeeyay oo ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland ayaa iska kaashanaya ammaanka.
Masuuliyiin kala duwan ayaa ku sugan Magaalada Kismaayo oo ka qaybgalaya xaflada calemo saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Xarunta Caymiska Magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa inay munaasabada ka dhacdo, halkaasi oo maalmahan dambe aad loo qurxinaayay si munaasabada maanta loogu qabto.